ခွဲမွေးခြင်းနဲ့ ကလေးသူငယ် အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုနဲ့ ဘာကြောင့် ဆက်စပ်မှုရှိတာလဲ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » ဆီးချိုသွေးချို » ခွဲမွေးခြင်းနဲ့ ကလေးသူငယ် အမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုနဲ့ ဘာကြောင့် ဆက်စပ်မှုရှိတာလဲ
​လေ့လာမှု​တွေအရ ဆီးချို type 1 ဖြစ်​ပွားနှုန်းမြင့်​လာတာနဲ့ သက်​ဆိုင်​တဲ့ အချက်​​တွေရှိတာ​တွေ့ရပါတယ်​။ ဗိုက်​ခွဲက​လေး​မွေးတာကလည်​ အ​ကြောင်းအရင်းတစ်​ခုပါဘဲ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဗိုက်​ခွဲက​လေး​မွေးတာက က​လေး​ရေိာခင်​​ရော အသက်​ကိုကယ်​ဖို့အတွက်​ မကြာခဏလုပ်​ရပါတယ်​။
ဆီးချို type 1 ဆိုတာဘာလဲ ?
ဆီးချို type 1 က ဘဝရဲ့အ​စောပိုင်း​တွေမှာဖြစ်​​လေ့ရှိပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ က​လေး​တွေနဲ့ လူငယ်​​တွေမှာ ​တွေ့ရများတာပါ။ ၅ ရာခိုင်​နှုန်း​သောလူ​တွေက ဒီဆီးချိုကိုခံစား​နေရပါတယ်​။
လူ​တွေမှာ ဆီးချို Type 1 ရှိတဲ့အခါ glucose ​တွေကို​ချေဖျက်​ဖို့ အင်​ဆူလင်​မထုတ်​နိုင်​​တော့ပါဘူး။ ဒါ​ကြောင့်​ သူတို့​သွေးထဲမှာ သကြားဓာတ်​​တွေပိုလာပြီး​သွေးချိုလာပါလိမ့်​မယ်​။ မကုသဘဲထားတဲ့ ဆီးချို type 1 က ​ဘေးဖြစ်​နိုင်​တဲ့ ရှုပ်​​ထွေးမု​တွေဖြစ်​လာနိုင်​ပြီး ​သေဆုံးတဲ့ထိဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​။
က​လေးခွဲ​မွေးတဲ့အခါ သင့်​ကိုနာကျင်​မှုသက်​သာ​စေဖို့ ထုံ​ဆေးသို့မဟုတ်​ ​မေ့​ဆေး​ပေးပါလိမ့်​မယ်​။ ထုံ​ဆေးကို သင့်​ခါး​နောက်​​အောက်​ပိုင်းက​နေထိုးပါလိမ့်​မယ်​။ ထုံ​ဆေးအစွမ်းပြပြီဆိုရင်​ ဆရာဝန်​က ခွဲ​မွေးဖို့အတွက်​ ဗိုက်​​အောက်​ပိုင်းနဲ့ သားအိမ်​မှာ ခွဲ​ရာ​လေးကိုခွဲစိတ်​ခန်းသုံးဓားနဲ့လုပ်​ပါလိမ့်​မယ်​။
သင်​မနာကျင်​​ပေမယ့်​ လှုပ်​ရှား​နေတာ​တော့သိပါလိမ့်​မယ်​။ က​လေးကိုထုတ်​ပြီးတာနဲ့ ဆရာဝန်​က အချင်းကိုထုတ်​ပြီး ခွဲရာ​တွေကိုပြန်​ချုပ်​ပါမယ်​။ ဒီနည်းလမ်းက က​လေးကိုသင့်​မိန်းမကိုယ်​ဆီကမ​မွေး​စေ​တော့ပါဘူး။
က​လေးခွဲ​မွေးခြင်းနဲ့ ဆီးချို Type 1
က​လေး​တွေ​မွေးလာတဲ့အခါ သူတို့အ​ရေပြားမှာ ဘက်​တီးရီးယား​တွေပါလာပါတယ်​။ က​လေးအ​ရေပြား​ပေါ်မှာရှိတဲ့ မိန်းမကိုယ်​က ဘက်​တီးယား​တွေက က​လေးကို ကိုယ်​ခံစနစ်​ဖွ့ဖြိုး​စေဖို့ကူညီပါတယ်​။ က​လေး​မွေးတဲ့နည်းလမ်း​တွေအ​ပေါ်မှာမူတည်​ပြီး က​လေး​တွေအ​ရေပြား​ပေါ်က ဘက်​တီးရီးယား​တွေက မတူနိုင်​ပါဘူး။
ရိုးရိုး​မွေးတဲ့က​လေး​တွေအ​ရေပြား​ပေါ်က ဘက်​တီးရီးယားက မိခင်​ရဲ့ မိန်းမကိုယ်​ထဲက ဘက်​တီးရီးယား​တွေနဲ့တူတူပါဘဲ။ ဒါ​ကြောင့်​ ခွဲ​မွေးတဲ့အခါ က​လေးငယ်​ရဲ့အ​ရေပြားမှာ ခုခံကာကွယ်​​ပေးတဲ့ မိန်းမကိုယ်​ ဘက်​တီးရီးယား​တွေ မရှိပါဘူး။ ဒါ​ကြောင့်​ သူတို့အ​ရေပြားမှာ type1 ဆီးချိုဖြစ်​​စေတဲ့ ပန်​ကရိယ beta ဆဲလ်​​တွေကို ​​ချေဖျက်​မယ့်​ခုခံစနစ်​မပါလာပါဘူး။
ဆီးချိုဝေဒနာကို ပိုဆိုးလာစေနိုင်မည့် စားသောက်မှုအလေ့အထများ
လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ဟာ ဆီးချိုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလား
Vehik K, Dabelea D. Why Are C-Section Deliveries Linked to Childhood Type 1 Diabetes?Diabetes. 2012;61(1):36-37.
Daniel Henryk Rasolt. C Section Delivery Increases Risk for Type 1 Diabetes. http://www.defeatdiabetes.org/c-section-delivery-increases-risk-type-1-diabetes/. Accessed October 27, 2016.
Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M, et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107:11971–11975.
Bager P, Wohlfahrt J, Westergaard T. Caesarean delivery and risk of atopy and allergic disease: meta-analyses. Clin Exp Allergy 2008;38:634–642.
Cesarean Section – HowaCesarean Section Is Done. http://www.webmd.com/baby/tc/cesarean-section-how-a-cesarean-section-is-done
အောက်ဆီဂျင်အသုံးပြုရသော ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို မည်သို့ အကျိုးပြုပါသနည်း။
[QUIZ] သင့်မှာဆီးချိုရောဂါနှင့် ပတ်သက်လို့ ဗဟုသုတ ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
သင့် အလှကုန်ပစ္စည်းတွေက ဆီးချိုရောဂါဖြစ်စေနိုင်သလား
ဆီးချိုသွေးချိုအမျိုးအစား ၂ နဲ ပတ်သက်ပြီး သင် အထင်မှားနေသော အချက်များ